BARNAAMIJKA ARDAYGA ARDAYDA waxaa bixiya tababarayaal tabaruc ah oo tababbaran oo bixiya waxbarid hal-hal ah. Ardaydu waxay bixiyaan diiwaangelin yar iyo khidmad buugaagta si ay u daboolaan qiimaha qalabka. Adeegyada umeerinta joogtada ah ayaa lagu bixiyaa lacag la'aan.
Ingiriisiga sidii Luqad Labaad
ALC waxay siisaa barashada hal-hal-ku-gaarka ah Ingiriisiga dadka aan kuhadlin afka hooyo. Manhaj ku saleysan heerarka ayaa la isticmaalaa oo ay ku jiraan dhageysiga, hadalka, akhriska iyo qorista. Horumarinta ereyada, naxwaha iyo wada sheekaysiga iyo goobta shaqada Ingiriisiga ayaa la adkeeyay.
ALC waxay bixisaa wax dhammaystiran Barnaamijka Horumarinta Waxbarashada Guud ee goobta si looga caawiyo ardayda buuxinta shuruudaha isu dhigashada dugsiga sare.
ALC waxay bixisaa fasalo diyaarinta muwaadinimada kuwaas oo isku daraya barashada bulshada iyo barashada luqadda Ingiriisiga, ka caawinta fahamka aqrinta, iyo xirfadaha qorista.
Waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn ee loo tababaray waxaa ka mid ah shaqada qorista iyo xisaabta iyo caawinta diyaarinta ardayda ee heerka gelitaanka iyo raadinta shaqooyinka wanaagsan. Barnaamijkan waxaa heli kara kuwa ku hadla afka hooyo iyo kuwa aan u dhalan.
Caawinaad khaas ah ayaa la siiyaa gelitaanka kuleejka oo ay ku jiraan diyaarinta imtixaanka iyo taageerada mar si guul leh loo aqbalo. Adeeggan waxaa la siiyaa dhammaan ardayda.
ALC waxay sii wadaysaa inay ku sii fidiso himiladeeda si ay u taageerto xirfadaha nololeed ee ardayda iyo bulshada weyn iyadoo la sameynayo iskaashi ay ku bixiyaan barnaamijyo maaliyadeed, caafimaad iyo barnaamijyo wax akhris ah oo dhijitaalka ah. Intaa waxaa sii dheer, ALC waxay la shaqeysaa ganacsatada bulshada si ay u qaabeeyaan barnaamijyo gaar ah oo lagu xoojiyo xirfadaha shaqada shaqaalaha si ay u buuxiyaan shuruudaha ganacsiga.